RW May oo Tiri Boolisku waa Yaqaan Isqarxiyaha iyo 23 Jir loo Qabtay – Radio Daljir
RW May oo Tiri Boolisku waa Yaqaan Isqarxiyaha iyo 23 Jir loo Qabtay
May 23, 2017 2:17 g 1
Manchester – Raysal Wasaare Theresa May ayaa sheegtay in la yaqaan isqarxiyaha konsartiga cawayska carruurta ee magaalada Manchester, laakiin aysan weli sheegi doonin si aysan wax xog ah u helin kuwii la shaqeeyey iyo kuwii soo abaabulay. Theresa May ayaa waxay kale oo sheegtay in doorashadii dalka ay tahay hakad illaa amar danbe.
Booliska magaalafa Manchester ayaa hadda la soo wariyey in ay soo xireen wiil 23 jir ah oo lagu tuhmayo ku luglahaanshaaha xasuuqa carruurta Manchester. Waa qofkii labaad oo loo xiriiriyo qaraxa Manchester.
Radio Daljir kala soco wixii soo kordha iyo shaacinta magaca isqarxiyaha Manchester.
Dhimashadu waa 22 Dhaawacuna 59 Qarixii Manchester (sawirro)
Ciise 1 year
Waaaa wax aad loooga xuuumaaado waxa meesha kadhacay waxaan lagayaabaa inay kuwa waxaaa sameeyey ay muslim sheeganayaan